Safiirkii dalka Ruushka u fadhiyey Turkiga oo la Toogtay[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Safiirkii dalka Ruushka u fadhiyey Turkiga oo la Toogtay[Sawirro]
ANKARA – Safiirkii dalka Ruushka u fadhiyey Turkiga Andrej Karlov ayaa la toogtay xili uu khudbad ka jeedinayey bandhig sawiro ah magaalada Ankara.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa xaqiijisay in Safiirku u geeriyooday dhaawacii soo gaaray.
Journaalka Hurriyet ayaa sheegay in ninkii dilka geystay ay Boolisku toogteen goor danbe.
Nicka dilla geystay ayaa ku qeylinayey:” Tani waa aargudasho waxa aad Xalab ka samayseen” sida uu qof googjoog ah u sheegay Telefishin laga leeyahay Turkiga.
Muuqaal laga duubay dilka oo lagu baahiyey Youtube ayaa muujinaya sida loo toogtay Safiirka oo dhulka yaala,kadibna xabbado dhawar ah ayuuna kor u ridey.
Ninka dilay oo safiirka gadaashiisa ka muuqda inta uusan toogan
Wuxuu ku qeylinayey Allah Akbar iyo gabby carabi ah oo ka hadlaya Jihadka ,wuxuu ku hadlaayey Afka Turkiga.
Warar ayaa sheegaya in ninka dilka geystay uu ka tirsanaa Booliska Turkiga muddooyinkii danbe uu fasax ku maqnaa ,da’diisuna ahayd 22 sano jir.
Safiirka Ruushka ayaa ninkan uu toogtay xili uu hadal jeedinayey,wuxuu ka dalabaday dadka iney goobta ka baxaan kadibna xabbad 2aad ayuu ku dhuftay Safiirka oo dhulka yaala,waxaana gaaray dhaawac culus.
Booliska oo toogtay goor danbe ninka dilka geystay
Booliska sida gara ah u tababaran ee Turkiga ayaa toogasho ku dicey ninka dilka geystay oo ka tirsanaa Booliska Turkiga.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa shir degdeg ah isugu yeeray Xukuumadiisa taasoo ay uga arinsanayaan xaaladda.lamase yaqaan sida ay xaaladu noqoneyso iyadoo labada dalka ay kasoo kabanayeen xiriir xumo ka dhalatay diyaarad Turkigu kasoo riday Ruushka oo hal askerf ku geeriyooday sanadkii 2015.
Muddooyinkii ugu danbeeyey safaarada ayaa si weyn loo adkeeyey amnigeeda kadib markii Ruushka si weyn u garab istaagay Xukuumadda Bashar Assad ee dalka Siiriya oo lagu eedeeyey in ay denbiyo dagaal ka geysteen Xalab.